अन्तरवार्ता – Page 8 – JanaSanchar.com
बलिउड नायक सलमान खानले मुम्बइमा रहेको आफ्नो ‘ग्यालेक्सी अपार्टमेन्ट’ छाड्ने भएका छन् । सलमान अब नयाँ घरमा सिफ्ट हुन लागेका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार सलमानले घर छाड्नुको मुख्य कारण, उनकी प्रेमिका लुलिया वन्तुर हुन् । लुलियाका लागि सलमानले नयाँ घर किनेका छन् र उनी चाडै नै त्यहाँ सिफ्ट हुँदैछन् । सलमान र लुलियाले नोभेम्बर महिनामा बिहे..
बलिउड अभिनेता शत्रुधन सिन्हा काठमाडौंमा
बलिउड अभिनेता सांसद शत्रुधन सिन्हा नेपाल आइपुगेका छन्। बुधवारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने एलजी फिल्म अवार्डमा सहभागी हुन भारतीय अभिनेता सिन्हा मंगलबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका हुन्। अभिनेता सिन्हा भारतीय जनता पार्टीका सांसदसमेत हुन्। अभिनेता सिन्हा सिनेमा वर्कसले आयोजना गरेको एलजी अवार्डमा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन्। १८ वटा विधामा..
रणवीरसँग रिसाइन् कट्रिना
रणवीर कपुर र कट्रिना कुनै जमानामा प्रेमी–प्रेमिका थिए । उनीहरूले ‘ब्रेकअप’ पछि पनि एकअर्कालाई बिझ्ने गरी बोलेका थिएनन् । एक अन्तर्वार्तामा रणवीरले भनेका थिए, ‘कट्रिना मेरो जिन्दगीकी प्रेरणादायक महिला हुन् ।’ तर, हालसालै के खबर आएको छ भने उनी कट्रिनाका ‘पर्सनल म्यासेज’ आफ्ना साथीहरूलाई देखाउँदै हिँड्छन् । एक अखबारका अनुसार यही कारण..
सुस्मिता सेनलाई थाहा छ सलमान खानले बिहे नगर्नुको कारण
मुम्बई । सलमान खानलाई प्राय सँधै सोधिने प्रश्न हो, विवाह कहिले गर्ने ? यो प्रश्नको उक्त दिंदा सलमान खान थाकिसकेका छन् । प्राय सार्वजनिक समारोहमा गरिने यस्ता प्रश्न खानले वेवास्ता पनि गर्ने गरेका छन् । खासमा सलमान विवााह गर्न चहाँदैनन् या यसका पछाडी अन्य कुनै कारण छन् ? यो एउटा रहस्य नै बनेको छ । तर हालसालै बलिउड नायिका सुस्मिता सेनले..
छविको हेरचाह गर्दैछिन् शिल्पा
गतबर्ष चलचित्र ‘लज्जा’ रिलिज हुने समयमा निर्माता छविराज ओझाले नायिका शिल्पा पोख्रेलसँग आफू बिहे गर्न तयार रहेको बताएका थिए । तर शिल्पाले भने छवि आफ्नो बाबु जस्तो भएको भन्दै बिहेको कुरा नहुने बताएकी थिइन् । त्यतीबेला छवि र शिल्पाको बिहे चर्चा चलचित्र चलाउने प्रोपोगन्डा थियो भन्ने पुष्टी भयो । तर, यसपटक भने शिल्पाको बोली पुरै फेरिएको छ ।..
रणबीरको ग्रहशान्ति गर्ने तयारीमा कपुर खान्दान
रणबीर कपुरको पर्सनल र प्रोफेशनल जीबनमा आएको कठिनाइ कम गर्नका लागि कपुर खान्दानले रणबीरको ग्रह शान्ति गर्ने भएका छन् । आमा नितु कपुर र बुबा ऋषि कपुरले रणबीरको ग्रह शान्तिका लागि विषेश कार्यक्रम बनाएका छन् । रणबीर अभिनित पछिल्लो कुनै पनि फिल्मले बक्स अफिसमा गतिलो प्रभाव देखाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय एउटा अन्तरवार्ताको क्रममा कट्रिना..
सलमानसँग खेल्न चाहिनन् काजोल
बलिउड सिक्वल ‘दबंग ३’ मा दुई अभिनेत्री राख्ने भनिएको छ । तर, को–को राख्ने पक्का भइसकेको छैन । केही समयअघि परिणीति चोपडाको कुरा उठेको थियो । लगत्तै फिल्ममा सोनाक्षी सिन्हा नहुने खबरले बलिउड तात्तियो । सन् २०१० मा ‘दबंग’ बाटै अभिनय प्रारम्भ गरेकी सिन्हा तेस्रो सिक्वलमा हुने/नहुने अहिले टुंगो लागिनसकेको निर्माता अरबाज खानले बताएका छन्..